Global Voices teny Malagasy » Niala ilay Kandidà Voalohany Avy Amin’ny LGBT Ho Ao Amin’ny Kongresy Ao Shily · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jona 2013 8:41 GMT 1	 · Mpanoratra Katie Manning Nandika nirinandrea
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Valentina Verbal dia nanao fampielezan-kevitra  hanova ny tantara ho voalohany amin'ny vehivavy, nefa teraka ho lehilahy, mpikambana ao amin'ny Kongresy ao Shily. Raha maharesy izy, dia mety hanàna solontena tao amin'ny Kongresy ny vondrom-piarahamonin'ny LGBT ao Shily, mialoha lalana ireo firenena rehetra manerana izao tontolo izao.
Nampahafantarina an'i Verbal fa tsy maintsy amin'ny anarany tena azy no hifaninanany na hanala avy hatrany ny firotsahan-kofidiany. Nanapa-kevitra ny hihemotra i Verbal.
Hoy ny bitsika nalefany (@valeverbal ) [es] :
@valeverbal : Voamarina: Noho ny fe-potoana napetraka, nanao fampakarana ny fangatahako dia tsy nahazo nirotsaka ho fidiana amin'ny anarako ara-tsosialy aho. Noho izany, hanala ny firotsahako ho fidiana eo anatrehan'i Servel (sampana miandraikitra ny fifidianana ao Shily) aho :-).”
Isan'ny dingan'i Shily ho amin'ny fitovian-tsaranga firotsahan-ko fidian'i Verbal. Nifidy voalohany tamin-kalalahana ilay politisiana lahy manambady lahy  ho mpanolo-tsaina monisipaly i Shily ny ririnina farany teo. Lalàna iray vaovao vao avy nolaniana no mandràra ny herisetra atao amin'ny vondrom-piarahamonin'ireo LGBT , ireo olona mitovy nefa mifanambady sy ireo maro hafa. Kanefa mbola mitohy ny herisetra. Ny fahazoana solontena maro avy ao amin'ny LGBT no làlana iray hahatongavana amin'izany, hoy i Verbal.
Koa dia nilatsaka ho solontenan'ny Recoleta-Independencia avy amin'ny disrika avaratri Santiago i Verbal. Naompany tamin'ny fanatraràna ny fitovin-tsaranga ny hafany, fa tsy tamin'ireo zavatra mahamaika ny distrikany.
Sorabavety ho an'ny fampielezan-kevitr'i Verbal, nozaraina tao amin'nyTwitter tamin'ny alalan'i @valeverbal
“Ny iraka tanterahako dia ny hanainga ny hisian'ny lalàna nasionaly. Nanome toky ny distrika misy ahy aho fa hiady ho amin'ny zon'ireo olona mahatsapa fa voahilikilika; Iriko ihany koa ny hisian'ny fitoviana ara-toekarena sy fandrosoana ara-tsosialy.”
Nirotsaka ho fidiana ao amin'ilay birao ilay vehivavy mitaky ny fitovian-tsaranga — kanefa tsy nitaky ny hanovàna ny anarany ara-panjakana. Verbal – izay teraka ho lehilahy, kanefa nilaza izy fa mahatsiaro tena ho vehivavy hatrany– dia nitahiry ho tsiambaratelo ny tena anarany teo am-pahaterahana. Nilaza izy fa tsy vitan'ny hoe tsy dia mampiseho ny maha izy azy loatra ilay izy, fa indrindra koa nampanahirana azy hatramin'ny fahakeliny.
“Nihevitra aho, angamba tamim-pahatsorana, fa na eo aza ny fahabangan'ny lalàm-pifidianana, ary hamehoana io fahabangana io aminà lalàna manohitra ny fanavakavahana, tsy hisy fisalasalàna ny hahazoako izay angatahako” hoy izy.
Nanazava i Verbal fa mety tsy fantatry ny mpifidy ny tena anarany ao anaty kopia eo amin'ny vatom-pifidianana. Noho izany mety ho rano raraka fotsiny ny fampielezankevitra noho ny anarany Valentina Verbal nampiasaina nandritra ny taona maro nanovany politika.
Mpikambana ao amin'ny antoko an-kavanana afovoany, ny ” National Renewal Party” (RN) koa izy ary nandany iny taona lasa iny nitolona hisian'ny lalàna hiadiana amin'ny fanavakavahana.
Nahita mpiray hevitra hafakely taminy i Verbal, izay mpikambana ao amin'ny RN, i Sebastian Piñera, Filohan'i Shily.
Miady manosika ny hivoahan'ny lalàna haha-ara-dalàna ny fanambadiana sivily izy. Efa nanao sonia ilay lalàna manohitra ny fanavakavahana ihany koa ila Filoha.
Izany lalàna izany, nihantona tao amin'ny Kongresy tao, dia nolaniana haingana taorian'ny fisian'ilay famonoana pelaka 24 taona, Daniel Zamudio, maty nodarohan'olona talohan'ny nanasian-dry zareo sarinà tanam-bokovoko tamin'ny vatany. Ireo LGBT niharan'ny herisetram-pankahalàna dia nanàna ny “Lalàna Zamudio ” niaro azy ireo hatramin'ny volana May 2012.
Teo ambany fifehezan'ny lalàn'i Zamudio, nampiakarin'ireo vehivavy mifanambady teny amin'ny fitsarana ireo mpiray vodirindrina aminy, roa herinandro lasa izay, araka ny voalazan'ilay bilaogy ” Homosexual Integration and Liberation” (Movilh  [es]).
Hoy ny voasoratra tao amin'ilay blaogy  [es] hoe :
Mpivady iray sy ny zanany lahy no nifandimby nihaodihaody nanodidina ny tranon'ilay “lesbienne” hamono sy hanompa azy ireo, nanàla baraka mafy sy tsy nitsahatra azy ireo.
Na dia nilaza aza i Valentina fa amin'ny ankapobeny dia manaiky ny toerana misy an'ireo olona nanova taovam-pananahana ireo politisiana maro miara-miasa aminy, dia tojo fanavakavahaan ihany izy teo amin'ny tontolo politikany, fa indrindra tety amin'ny filazam-baovao sosialy. Vao haingana izy no nandefa bitsika mikasika ny hatezerany manoloana ny fankahalàna olona.
@valeverbal : Mieritreritra ny hanidy ny kaontiko Twitter aho. Tena mankaleo ahy ny tahan'ny faniratsiran'ny maro hita ato amin'ity tambajotra ity.
Tsy nakatony ny kaontiny, izay sehatra iray ampiasainy hiarovany ny firehany sy ny zon'ireo LGBT.
Raha toa i Verbal ka tsy nirotsaka tamin'ity fifidianana indray mitoraka ity, hoy izy , “Zavatra iray no azoko antoka : hanohy ny fanaovana politika aho.” ary nampiany hoe , “Mba hahazoana fiovàna sosialy mahery vaika, dia tena ilaina manao izany avy eo amin'ny toeran'ny tompon-kery, indrindra ao amin'ny Parlemanta. Satria tena firenena mpanara-dalàna i Shily, dia tena zava-dehibe ny fanamboarana lalàna hanairana ireny fiovàna ireny.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/21/49249/
 nanao fampielezan-kevitra: http://www.santiagotimes.cl/opinion/special-reports/25636-interview-chiles-first-transgender-congressional-candidate
 tamin-kalalahana ilay politisiana lahy manambady lahy: http://www.washingtonblade.com/2012/11/19/chile-elects-first-openly-gay-politician/